Mashruuca Gawaarida Dabka ee Sapanca Cable wuxuu ka sii soconayaa halka ay ku dhacday | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara54 SakaryaMashruuca Gawaarida Dabka ee Sapanca Cable wuxuu ka sii soconayaa meeshii uu ka tagay
21 / 01 / 2020 54 Sakarya, GUUD, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY, TELPHER
Mashruuca gawaarida fiilada ee Sapanca wuxuu ka sii socdaa meeshii uu ka tagay
Shaqada, oo in muddo ah joogsatey saldhigga gawaarida fiilada ee Sapanca Kırkpınar, ayaa mar kale bilaabay saaka. In kasta oo la taaban karo ee ku qulqulaya goobta dhismaha, ayaa dadka gobolka ay xanaaqsan yihiin…
Mashiinnada ayaa bilaabay inay mar kale saaka ka shaqeeyaan mashruuca gawaarida fiilada ee Sapanca Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi, kaas oo inbadan laga wada hadlay iyo halka ay dadka maxalliga ahi ka sii mudaaharaanayaan.
Shubka ayaa bilaabay in lagu shubo aagga dhismaha-hoosaadka ee Kırkpınar.
Dadka gobolka, oo muddo bilooyin ah dibad-bax ka dhigayay gobolka oo sii waday iska caabinta teendhadii ay dhiseen muddo dheer, ayaa dib u soo kacay.
Markay muwaadiniintu bilaabeen inay isugu soo baxaan hareeraha goobta dhismaha, tiro badan oo booliis ah ayaa timid.
Muwaadiniintu waxay ku murmayaan saraakiisha goobta.
Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Sakarya Ekrem Yüce ayaa sheegay inay joojinayaan shaqooyinka ka dib kulanka ay la qaateen mudaharaadayaasha, “Waxaan weydiisanay shirkadda inay ka dhigto gaariga kaameerada inuu joojiyo howlaha. Ilaa go'aan sharci laga gaarayo ”.
Duqa magaalada Sapanca Özcan Özen oo la yiraahdo Sakarya Yenihaber; Ma aanan sameynin in kasta oo ay dadwaynuhu leeyihiin. Xal uma heli karo ”.
Engin Özkoç, Madaxweyne kuxigeenka kooxda CHP iyo Sakarya kuxigeenka, ayaa yimid gobolka. Intii uu dhageysanayay muwaadiniinta, Özkoç wuxuu sheegay inuu isku deyi doono inuu arrinta u gudbiyo Madaxweyne Erdo matteran oo uu la hadlo masuuliyiinta. Dadka gobolka ayaa markaa go’aansaday inay aadaan degmada Sapanca.
Muwaadiniintu markay aadeen Dawladda Hoose, waxaa lagu wargaliyay in aanu jirin Duqa Magaalada Özcan Özen. Muwaadiniintu waxay la kulmayaan Kuxigeenka Duqa Magaalada Abdullah Şahin.Sakaryayenihab waa)
Mashruuca taraamulka Kocaeli oo dib u bilaabaya
3. Madaarka dib ayuu u noqdaa
Shaqooyinka dib u soo celinta ee Söke Train Station ayaa sii socota
Tuunektar telefoonka Tünektepe waqtigan waayeelka ah ayaa jaray cagta
Isticmaalka line-upka cusub ee Istanbul wuxuu ku dhaafi doonaa Sariyer
Nidaamka Tamarta Meelaha laga buuxiyo ee loo yaqaan "Eminönü Alibeyköy Tram Line"
Hawlaha Asfalt ee Degmada Sapanca Works Continue
Duqa magaalada Serdivan ee Alemdar oo ka hadlaya mashruuca garabka bidix ee Sapanca
Mashruuca gawaarida ee Sapanca Lake Izmit Bay ayaa gaadhay marxaladda hindisaha